Hlalani ententeni yoMthi! (Intente eBomvu) - I-Airbnb
Hlalani ententeni yoMthi! (Intente eBomvu)
Igumbi lakho lokulala e intente sinombuki zindwendwe onguMichael
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uMichael iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Intente yomthi enendawo yokuhlala etofotofo yabantu aba-2 abanoomatrasi abangqingqwa, isitovu somthi, ibhasikidi yomthi, izibane ze-LED, izivalo kunye nokukhanya kwesibhakabhaka. Intente yomthi yahlulwe yimbonakalo entle yechibi ngaseLake Vättern's bay esemantla eAlsen. Abantu abaninzi bafumanisa ukuba intente ipholile ngakumbi xa kunetha imvula kwaye ivuthuza xa intente ifudunyezwa ngesitovu seenkuni. Isidlo sakusasa sithathwa ngaphakathi kwi-Shooting Pavilion okanye kwiveranda. Ibhokisi yesidlo sakusasa nayo inoku-odolwa kwiintente.
Iintente zemithi zikwi-Base Camp ebekwe eBorgmästarholmen e-Askersund. Kwi-Base Camp kukho indawo yokwamkela iindwendwe, i-café, i-bistro, ikhitshi langaphandle, ulwandle, i-sauna yeentente, iishawari zangaphandle ezinamanzi ashushu, izindlu zangasese ekwabelwana ngazo kunye nerenti ye-kayak. Kukwakho neentente zedome, itonela, iindlwana kunye nezixhobo zokulala.
Inkampu esisiseko eBorgmästarholmen ikwincam esemantla eLake Vättern kwaye emazantsi eTiveden. Indawo ibonelela ngamathuba amahle okuhamba intaba, i-kayaking kunye nokukhwela ibhayisekile.
Mitt största intresse i livet är outdoor och därför driver jag och mitt team en Base Camp som har uthyrning av unika lösningar på boende trädtält, trädkåtor och kupoltält och tunneltält. Gillar själv att vandra, cykla och paddla.
Abasebenzi bakhona ngokuhlala kwakho emini.